काठमाडौँ, चैत २९ – सरकारले वैशाख १ गतेबाट निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाका ल..
एजेन्सी चैत २९ – आयुर्वेदमा खान–पिनको विषयमा नियम बनाइएको छ । आयुर्वेदमा विपरित ..
ओन्ली माइ हेल्थ चैत २९ – जवान देखिन हरेकको चाहना हुन्छ । तर थुप्रै पटक थाहा नपाइ..
काठमाडौँ, चैत २८ – होमियोप्याथिक चिकित्सकले छुट्टै काउन्सिल बनाउन सरकारसँग माग ग..
जान्नुहोस् , स्मार्टफोन छनोट गर्ने सरल तरिका
सुजन राजभण्डारी, सञ्चालक, प्रिन्स मोबाइल, बानेश्वर स्मार्टफोन खरिद गर्नुअघि तपाईं कुन विषयलाई बढी महत्व दिनुहुन्छ ? यदि मूल्यलाई नै आधार मानेर स्मार्टफोन छनोट गर्नुहुन्छ भने त्यो मूर्खता हुन सक्छ । स्मार्टफोन किन्नुअघि ग्याजेटमा प्रयोग हुने सामान्य एसेसरिज तथा शब्दावलीबारे जानकारी राख्नुपर्छ । ग्याजेटका सामान्य शब्द तथा एसेसरिजक..
ब्लड टेस्ट गर्नुअघि…
पृथ्वीविक्रम खड्का, ल्याब टेक्निसियन, शुक्रराज सरुवारोग अस्पताल शुक्रराज सरुवारोग अस्पतालरक्त परीक्षण गर्न अस्पताल वा ल्याबमा जाने क्रममा हतार गर्नु हुँदैन । केही समय आराम गरेर मात्र परीक्षण गर्ने रगत निकाल्नुपर्छ । रोगको प्रकृतिअनुसार ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ । सोही टेस्टअनुसारको स्याम्पल कलेक्सन हुन्छ । प्रायः टेस्टहरू र्‍यान्डम्ल..
एजेन्सी चैत २५ – केही समयअघि भएको एक अध्ययन अनुसार अण्डाको बोक्राले छालालाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । अण्डाको बोक्रामा पाइने प्राकृति एसिड र गुणले छालाको सफाई गर्दै त्यसलाई चम्किलो बनाउँछ । त्यसकारण अर्कोपटक अण्डाको बोक्रालाई फाल्नुभन्दा पहिले एकपटक अवश्य पनि सोच्नुहोस् । १. रोमछिद्रलाई खोल्ने गर्दछः छालामा अण्डाको बोक्रा लगाउँदा र..
गर्भ नरहेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यी १० कारण त होइनन् ?
एजेन्सी चैत २५ – ‘ह्यूमन रिप्रोडक्सन’ मा प्रकाशित एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार थुप्रै जोडीले चाहेर पनि आफ्नो बच्चाको योजना बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसको स्वास्थ्य र जीवनशैलीसम्बन्धि थुप्रै कारण हुनसक्छ । फर्टिलिटी एक्सपर्ट र इन्डियन फर्टिलिटी सेसाइटीका प्रमुख (एम.पी. चेप्टर) डा. रणधीर सिंहका अनुसार अधिकांस समस्या अस्थायी हुने गर्दछन..
गर्मीमा उखुको रस पिउनुका १० फाइदा
काठमाडौँ, चैत २३ – गर्मीमा उखुको रस पिउनुको धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । डाक्टरहरु एक दिनमा कम्तीमा १ ग्लास उखुको रस पिउनुपर्छ । तर, यसलाई पिउँदा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । यस्ता छन् फाइदाहरु : १. यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ । यसले मुटुका रोगीहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ । […]
मोटोपन घटाउने तरिका गलत हुन सक्छ
प्रकाशराज रेग्मी, मुटुरोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल शरीर अनावश्यक रूपमा मोटाउनाले आजभोलि धेरै मानिस चिन्तित हुने गर्छन् । जसले गर्दा आफ्नो शरीरको तौल कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । मोटोपन घटाउन कतिपय मानिस विभिन्न औषधि पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर, यसरी जुन पायो त्यही औषधि सेवन तथा भोकै बस्ने बानीले शरीरलाई हानि पु¥याउन सक्छ..
थोरै मिहिनेतले मोटरसाइकल सधैँ चम्किलो
सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, अहिले राजमार्गका सडक पनि धुलाम्य भएका छन् । जसले गर्दा सवारीचालकलाई त धुलोले असर पु¥याएको छ नै, त्यसले सवारीसाधनलाई पनि खराब बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सफा र चम्किलो मोटरसाइकल चलाउने चाहना पूरा गर्न समस्या नै हुन्छ । सधैँ सफा गर्न वास सेन्टरमा लाने सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले मोटरसाइकल घरैमा [&helli..
सुदीप घिमिरे आइटी प्रशिक्षक डिआइटी सोलुसन, बागबजार कम्प्युटर चलाउँदा धेरै नै अनावश्यक फाइल थुप्रिएर बसेको हुन्छ । त्यस्तो फाइलले कम्प्युटरको स्पेस ओगटेर कार्यक्षमतामा असर पु¥याएको हुन्छ । सकेसम्म चाँडो अनावश्यक फाइल डिलिट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रनमा क्लिक गरेर अभिबल%temp% टाइप गरेर इन्टर गर्ने र क्लिन गर्नुपर्ने ड्राइभमा क्लिक ..
महिनावारीमा यौनसम्पर्क कति सुरक्षित ? थाहा पाउनुस् १० तथ्य
एजेन्सी चैत २२ – थुप्रै अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सेक्सको सिधा सम्बन्ध तपाईंको स्वास्थ्यमा हुन्छ । तर कस्तो अवस्थामा यस्तो सम्बन्धबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने बारे जानकारी हुन पनि आवश्यक छ । धेरैजसो जोडीहरु महिनावारी हुँदा यौनसम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अनभिज्ञ हुन्छन् । के महिनावारी हुँदा यौन सम्बन्ध राख्दा..
बालबालिकामा कार्टुन मोह : कतै हिंसात्मक मनोविज्ञान त सिकाउँदै छैन ?
सुधिरमान सिंह बि.के.खाती प्रसिद्ध अमेरिकी बैङ्कर हिदी स्टेनलीले सन् १९९० तिर रचित कृति ‘कलेज फ्रेसमेन’मा लेखेकी छिन्– “टिभी एउटा यस्तो पार्क हो, जहाँ हामी विद्यालय समयपछि सधैँ रमायाँै” । आज भोलिका बालबालिकाहरु हिदी स्टेनलीजस्तै स्कुलबाट घर आउने बित्तिकै टिभी (कार्टुन) मा नरमाउने सायदै कम होलान् । हालैका वर्षहरुमा बालबालिकाहरुका ..
वक्षस्थलबारे थाहा पाउनै पर्ने २२ रोचक तथ्य
एजेन्सी चैत २१ – स्तनको साइज के हो, आकार कस्तो र कस्तो प्रकारको ब्रा धेरै मनपर्छ ? यस्तो केही प्रश्न छन् जो महिला र पुरुषको दिमागमा बक्षस्थलबारे सोच्ने गर्दछन् । महिलाको बक्षस्थल सधैं पुरुषका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गर्दछ । तर पुरुषमात्र नभई महिला पनि अन्य महिलाको स्तनमा घुर्ने गर्दछन् । सुनेर अचम्म लाग्यो नि […]
यदि तपाईं पनि व्यायाम गर्नुहुन्न भने सावधान !
बीबीसी चैत २१ – बेलायत हार्ट फाउन्डेशनको एक रिपोर्ट अनुसार बेलायतमा दुई करोडभन्दा धेरै मानिस व्यायामबाट कोसौं टाढा छन् । संस्थाले दिएको चेतावनी अनुसार व्यायामभन्दा टाढा बस्ने मानिसहरुमा मुटुरोगको आशंका बढ्ने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएसं माथि हरेक वर्ष १.२ अर्ब पाउन्डको भार पर्ने गर्दछ । ह्यारियट मलवैनीलाई ४४ वर्षको उमेरमा..